Qarixii Muqdisho Muxuu kaga duwan yahay kuwii hore? | Berberanews.com
Home WARARKA Qarixii Muqdisho Muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Qarixii Muqdisho Muxuu kaga duwan yahay kuwii hore?
Previous articleDowladda Kenya oo farriin tacsi ah u dirtay xukuumadda Soomaaliya
Next articleSomaliland: What are the agriculture skills this country needs?
Marxuum Fanaan Maxamed Maxamud Cige oo maanta la aasay iyo shakhsiyaddiisii oo ay ka hadleen madaxda qaranka